Aya ndiwo mashandiro anoita Apple Music Voice, chirongwa chitsva che € 4,99 chete | IPhone nhau
Nekusvika kweiOs 15.2, chirongwa chitsva cheApple Music chichasvikawo. Inonzi "Apple Music Voice", chete € 4,99 inotibvumira kunakidzwa neApple Music catalog kunyange nenzira yakasiyana pane yenguva dzose. Tinotsanangura kuti inoshanda sei.
1 Nzira yekuihaya
2 Pazvishandiso izvo zvinogona kushandiswa
3 Inosanganisira mimhanzi ipi
4 Zvinodzorwa sei
5 Apple Music Voice kugumira
6 Ichawanikwa riini
Apple Music inogona kubvumidzwa nguva dzose kubva kuApple Music application uye ichaita mutengo pa € ​​​​4,99. Parizvino haina kubatanidzwa mune chero Apple One package, uye mukana uyu hautarisirwe kusvika chero nguva munguva pfupi. Pfungwa yacho ndeyekuti yakachipa Apple Music hurongwa kune avo vanoda kunakidzwa nechirongwa ichi kuti vateerere mimhanzi nguva dzose vachishandisa izwi ravo, kureva, kuburikidza neSiri. Avo vasina kumboedza Apple Music vachakwanisa kunakidzwa nayo kwemwedzi mitatu yemahara, seyedzo, mushure mezvo vanototanga kubhadhara mari yemwedzi nemwedzi ye3.
Pazvishandiso izvo zvinogona kushandiswa
Unogona kunakidzwa neApple Music pane chero mudziyo une Siri. Izvi zvinoreva kuti unogona kuishandisa pane yako iPhone, iPad, iPod touch, Mac, HomePod, HomePod mini uye Apple TV. Ehe, inogona kushandiswa kuburikidza neApple accessories, senge AirPods, chero yakabatana kune Apple mudziyo ine internet yekubatanidza, uye muCarPlay.
Inosanganisira mimhanzi ipi
Apple Music Voice inosanganisira iyo yose Apple Music music catalog, pasina zvirambidzo. Nziyo dzinosvika mamirioni makumi mapfumbamwe dzichave dzaunogona kuteerera chero nguva uye chero kwaunoda. Iwe zvakare uchave nekuwana Apple Music Radio. Mazano emumhanzi anosanganisirwawo muMumhanzi application, uye iwe zvakare uchave uine kwauri runyoro rwemumhanzi uchangoburwa unoridzwa.
Iwo ekutamba ekudzora akazara, pasina chero mhando yekurambidzwa. Iwe unozogona kubva pane rwiyo kuenda kuimba pasina chero muganho, hazvina kufanana nehurongwa hwemahara hwemamwe mapuratifomu asingakubvumidze iwe kusarudza zvaunoteerera uye izvo kwete. Izvo zvakare haisanganisi kushambadza kwechero rudzi. Hongu zvirokwazvo, zvidzoreso zvinofanira kugara zvichiitwa kuburikidza neSiri, hauzokwanisi kushandisa zvidzoreso zvechidzitiro zvekushandisa, ndiko kungogumira kwayo. Kana iwe ukaedza kushandisa zvakajairwa zvinodzora, zvicharatidza kuti hazvigoneke, uye zvinopa zano kuti uende kune yakazara chirongwa.
Apple Music Voice kugumira
Pamusoro pekusakwanisa kushandisa zvakajairwa zvinodzora uye kugara uchishandisa Siri kudzora Apple Music, pane zvimwe zvinhu zvatisingakwanise kuwana. Iwe haugone kuteerera mimhanzi mumhando yepamusoro (pasina kurasikirwa) uye isu hatizokwanisa kushandisa iyo Spatial Audio.. Hatikwanisewo kudhawunirodha mimhanzi kuti tiiteerere kunze kwenyika, pasina chinongedzo cheinternet. Hatizokwanisi kuona mavhidhiyo emimhanzi, kana mashoko enziyo dzacho, uyewo hatizokwanisi kuona kuti shamwari dzedu dziri kuteerera chii. Chekupedzisira, sezvatakataura pakutanga, inogona kungonzwika pamidziyo ine Siri, saka haisi kuwanikwa pane mapuratifomu kunze kweApple, senge Android kana Windows.
Apple Music Voice ichauya ichibatana neIOS 15.2, zvinofanotaurwa kubva svondo rinouya. Ichawanikwa muSpain neMexico, pamwe neUnited States, Australia, Austria, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, India, Ireland, Italy, Japan, New Zealand, Taiwan neUnited Kingdom.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Aya ndiwo mashandiro anoita Apple Music Voice, chirongwa chitsva che € 4,99 chete
WhatsApp inotokubvumidza kuti utumire uye ugamuchire mari muchimiro chekrisptocurrencies muUS